Bit By Bit - ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရား - 6.4.4 ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်လေးစား
သင့်ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ကိုလမျးညှနျနိုငျသောစတုတ္ထနှင့်နောက်ဆုံးနိယာမဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်လေးစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနိယာမအ Menlo အစီရင်ခံစာမှလာသောကြောင့်လူမှုရေးသုတေသီများမှလျော့နည်းလူသိများလိမ့်မည်။ အဆိုပါ Menlo အစီရင်ခံစာဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်လေးစား၏နိယာမကောင်းတဲ့၏မူအရသွယ်ဝိုက်ကြောင်းစောဒကတက်ပေမယ် Menlo အစီရင်ခံစာကြောင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားထိုက်ကြောင်းစောဒကတက်သည်။ အကြှနျုပျ၏စိတျထဲမှာ, ဒီနိယာမကိုစဉ်းစားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကောင်းတဲ့သင်တန်းသားများကိုအာရုံစိုက်ဖို့လေ့နှင့်ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားသည်လေးစားအတိအလင်းတစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်အမြင်ယူမှသုတေသီတွေကအားပေးနှင့်၎င်းတို့၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားဥပဒေပါဝင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ Analog စအသက်အရွယ်သုတေသနလုပ်ငန်း-ထိုကဲ့သို့သောအစဉ်အလာစစ်တမ်းများနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်-သုတေသီများအဖြစ်မတော်တဆပညတ်တရားကိုချိုးဖျက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြ။ အွန်လိုင်းသုတေသနအတွက်, ဒီ, ကံမကောင်းတာလျော့နည်းမှန်သည်။
(1) လိုက်နာနှင့် (2) Transparency-based ခံမှု: အ Menlo အစီရင်ခံစာအတွက်, ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်လေးစားနှစ်ခုကွဲပြားအစိတ်အပိုင်းများရှိနေပါတယ်။ လိုက်နာသုတေသီများသက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ, ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များကိုဖော်ထုတ်ပြီးကိုနာခံဖို့ကြိုးစားဆိုလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, လိုက်နာမှု website တစ်ခုများ၏ content scraping စဉ်းစားနေတဲ့သုတေသီက website ၏စည်းကမ်းချက်များ-of-service ကိုသဘောတူညီချက်ဖတ်ခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြောင်းဆိုလိုပေသည်။ သို့သော်ကန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များကိုဖောက်ဖျက်ဖို့ခွင့်သည်အဘယ်မှာရှိအခြေအနေများရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာတစျခုအချိန်မှာ Verizon ကနှင့် AT & T ကနှစ်ဦးစလုံးကသူတို့ကိုဝေဖန်ထံမှဖောက်သည်တားဆီးကြောင်းဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များခဲ့ (Vaccaro et al. 2015) ။ သုတေသီများအလိုအလြောကျထိုကဲ့သို့သောစည်းကမ်းချက်များကို-of-service ကိုသဘောတူညီချက်များအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်မဖြစ်သင့်။ သုတေသီများဝန်ဆောင်မှုသဘောတူညီချက်များ၏စည်းကမ်းချက်များကိုဖောက်ဖျက်လျှင်အကောင်းဆုံးကတော့, သူတို့ (ဥပမာ, ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်၎င်းတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရှင်းပြသင့်တယ် Soeller et al. (2016) ) ။ ဒါပေမဲ့, ဒီပွင့်လင်းဆက်ပြောသည်ဥပဒေရေးရာအန္တရာယ်မှသုတေသီများကဖော်ထုတ်လိမ့်မည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဥပမာ, ကွန်ပျူတာလိမ်လည်မှုနှင့်အက်ဥပဒေအလွဲသုံးစားပြုမှုဝန်ဆောင်မှုသဘောတူညီချက်များ၏စည်းကမ်းချက်များကိုချိုးဖောက်ဖို့ကတရားမဝင်စေသည် (Sandvig and Karahalios 2016) ။
ထို့ပြင်င့်လင်းမြင်သာ-based တာဝန်ခံသုတေသီများက၎င်းတို့၏သုတေသနပြုမှုဖြစ်စဉ်၏အားလုံးအဆင့်ဆင့်မှာရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်, နည်းလမ်းများနှင့်ရလဒ်များကိုအကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်နှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်တာဝန်ယူရန်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ ဒီင့်လင်းမြင်သာ-based ်ခံမှုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့လျှို့ဝှက်အတွက်အမှုအရာအကျင့်ကိုကျင့်မှသုတေသနအသိုင်းအဝိုင်းကတားဆီးဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီင့်လင်းမြင်သာ-based တာဝန်ခံကျင့်ဝတ်နှင့်လက်တွေ့နှစ်မျိုးစလုံးအကြောင်းပြချက်များအတွက်အရေးကြီးသောသောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးငြင်းခုံအတွက်သုတေသနလုပ်ငန်းအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အများပြည်သူများအတွက်ကျယ်ပြန့်အခန်းကဏ္ဍကိုနိုင်ပါတယ်။
ဤသုံးပါးလေ့လာမှုများမှဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်လေးစား၏နိယာမလျှောက်ထားသည်ပညတ်တရားမှကြွလာသောအခါသုတေသီများရင်ဆိုင်ရရှုပ်ထွေးအချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Grimmelmann (2015) စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်မေရီလန်းပြည်နယ်၏ပြည်နယ်ဥပဒေအရတရားမဝင်ခဲ့ကြခြင်းအလိုငှါစောဒကတက်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် 2002 ခုနှစ်ကအောင်မြင်ပြီးမေရီလန်းပြည်နယ်အောက်လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်း 917, များစွာသောကျွမ်းကျင်သူများကကောက်ယူခဲ့သောကြောင့်, စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအောက်မှာအဖြစ်များသည့်စည်းမျဉ်းမှဘာသာရပ်မဟုတ်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်၏လွတ်လပ်သောမေရီလန်းကောက်ယူအားလုံးသုတေသနလုပ်ငန်း, (ပြန်လည်သိမ်းဆည်းဖို့အဖြစ်များသည့်နည်းဥပဒေကာကွယ်မှုကိုတိုးချဲ့ Facebook ကအမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့ထံမှသုတေသနလုပ်ငန်းရန်ပုံငွေမခံမယူသည့်အဖွဲ့အစည်း) မှာ။ သို့သော်အချို့ပညာရှင်များမေရီလန်းပြည်နယ်အောက်လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်း 917 [unconstitutional ကိုယ်တိုင်ကကြောင်းယုံကြည် Grimmelmann (2015) ; စ။ 237-238] ။ လူမှုရေးသုတေသီများကလေ့ကျင့်တရားသူကြီးတွေမဟုတ်ထို့ကြောင့်အားလုံး 50 ဦးကိုအမေရိကန်ပြည်နယ်များ၏ဥပဒေများ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံနားလည်အကဲဖြတ်ရန်တပ်ဆင်ထားကြသည်မဟုတ်။ ဤရွေ့ကားရှုပ်ထွေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများတွင်ပိုဆိုးနေပါတယ်။ Encore ဥပမာ, ဥပဒေရေးရာလိုက်နာမှုမယုံနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲစေသည်သောနိုင်ငံပေါင်း 170 ကနေသင်တန်းသားများပါဝင်ပတ်သက်။ သူတို့ရဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းသတိလစ်တရားမဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. အကွံဉာဏျ၏ရင်းမြစ်နှစ်ခုစလုံးအဖြစ်နှင့်အမှုတစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်မှုအဖြစ်စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဥပဒေရေးရာပတ်ဝန်းကျင်တုံ့ပြန်အတွက်, သုတေသီများ, သူတို့ရဲ့အလုပ်၏ Third-party ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်ကိုခံယူဖို့သတိထားသင့်ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ရှိသမျှသုံးလေ့လာမှုများင့်လင်းမြင်သာ-based ်ခံမှုအားဖွင့်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်မှာသူတို့ရဲ့ရလဒ်များကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သုတေသနအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်လူထုအသိပေး-ပြီးနောက်ခဲ့ကြသည်ထို့ကြောင့်သုတေသနဆိုတဲ့အချက်ကို-အကြောင်းကိုဒီဇိုင်းနှင့်ရလဒ်များကိုတကယ်တော့စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်ပွင့်လင်း access ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ မြင်သာ-based တာဝန်ခံအကဲဖြတ်ရန်လက်မတစ်ခုမှာအုပ်ချုပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်: ငါ့သုတေသနလုပ်ငန်းလုပျထုံးလုပျနညျးအကြှနျုပျ၏အိမျပွမြို့သတင်းစာများ၏ရှေ့စာမျက်နှာပေါ်တွင်အကြောင်းရေးသားခဲ့လျှင်ငါသက်သာဖြစ်မလဲ အဖြေကိုအဘယ်သူမျှမဖြစ်လျှင်, ကြောင်းကိုသင်၏သုတေသနလုပ်ငန်းဒီဇိုင်းအပြောင်းအလဲများလိုအပ်နေသည်ဟုတစ်ဦးအားကြီးသောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုလေးစား, ကောင်းတဲ့, တရားမျှတမှုနှင့်ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်လေးစား: နိဂုံး၌, Belmont အစီရင်ခံစာနှင့် Menlo အစီရင်ခံစာသုတေသနလုပ်ငန်းအကဲဖြတ်ရန်ဖို့အသုံးပြုနိုင်လေးအခြေခံမူတင်ပြသည်။ လက်တွေ့တွင်ဤလေးပါးအခြေခံမူလျှောက်ထားအမြဲရိုးမရှိ, ကခက်ခဲ balancing လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်ထဲကနေသင်တန်းသားများ debrief ဖို့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ကြသောအခါ (ထို debriefing ကိုယ်တိုင်ကအန္တရာယ်ပြုပါလိမ့်မယ်လျှင်) ကောင်းတဲ့ debrief ့တားခြင်းငှါသော်လည်းဥပမာ, လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုလေးစား debriefing အားပေးပေလိမ့်မည်။ အဲဒီမှာကဤယှဉ်ပြိုင်အခြေခံမူဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့မလိုအလျှောက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နိမ့်ဆုံးမှာလေးခုအခြေခံမူ, trade-off ရှင်းလင်းဒီဇိုင်းများသုတေသနမှစသောအပြောင်းအလဲအကြံပြုနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်အထွေထွေအများပြည်သူနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဆင်ခြင်ခြင်းရှင်းပြဖို့သုတေသီများကို enable ကိုကူညီပေးပါတယ်။